Adoolessa 21, 2021
Presidaantii yeroo biyya Aaalii, Assimii Go’itaa (edduu)
Presidaantii yeroo biyya Maalii Assimii Go’itaa irrati maskiidaa gudichaa magaala Bamakuu jiru keesatii qibxata har’aa aggaamini ajjeechaa tasifamuu isaa Ajaans Fraans Prees AFPn gabaseera.
Aggamichii kan godhame kadhannaa ayyaana ID Aldahan booda yemuu ta’u tarkanifichaa irratii kan qooda fudhatan namoota lama akka ta’an beekameera.
Ministerii dhimaa Amantaa Maalii Mamaduu Kone akka Gaazexeessaa AFPti himanitii warren agaamii ajjeechaa prezidantichaa irrtii yaalan qabamaniiru.
Daarekterii maskiida gudichaa biyyatii Laatus To’uree warrii tarkaanifichaa fudhatan prezidaant Assimii Go’itaa aalbeedhaa waranuuf yaalamus namaa biraa akka waraananii madeessan himuu isaanii gazexeesaan AFP ibseera.
Koloneel Assimii Go’itaa bara 2020 prezidaantii maalii duraanii Ibrahiim Ba’ubakar kee’itaa irgaa anngoo irraa fonqolchanii boodaa prezidaantii yeroo ta’nii turan.
Ergaa aangoon gara mootummaa sivilotaatii deebi’ee boodaa ammas bbara kana ji’a caamsaa keesaa prezidaant Bah Ndaw irraa aangoo umnaan fudhatanii prezidaantii yeroo ta’anii biyatii bulchaa jiru. Filannoon Guraandhala 2022 tasifamudhaaf karoorfameera.
Bara 2012 kaasee ergaa loltoonii jihaadistootaa Kaaba biyyatii keessa ka’nii gara biyya Burkii Nafaasoo fi Biya Nijeritii baballatanii tarkaanfii fudhachuu jalaqabanii as biyyii Maalii lola keessa jiraachuun ishee ni beekama.
Humni Poolsii Naayijeriyaa Haleellaalee Dhiheenya Kana Bakka Addaatti Namoota Fixan Qorachaa Jiran
Magaalaa Darbaan Baatii Tokko Dura Jandoo Roobaan Mancaate Ammas Jandoo Biraatu Itti Deebi’e
Keniyaan Lammiwwan Ishee Midhaa Irra Ga'u Akka Hubataniif Leenjii Kennaa Jirti
Caamsaa 25 Guyyaa Ardii Afrikaa